JIRI AKWUKWO AHA EDEZI AMAMIHE - WINDOWS - 2019
Jiri akwukwo aha edezi amamihe
N'ọtụtụ isiokwu na saịtị remontka.pro, agwara m gị otu esi eme nke a ma ọ bụ omume ahụ site na iji ndekọ Windows Registry - gbanyụọ disks ikike, wepụ ọkọlọtọ ma ọ bụ mmemme na ebudata.
Site n'enyemaka ederede ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe ọtụtụ mpaghara, bulie usoro ahụ, gbanyụọ ọrụ ọ bụla na-adịghị mkpa na usoro ahụ na ihe ndị ọzọ. Isiokwu a ga-ekwu banyere iji Editor Editor, ọ bụghị nanị ntụziaka ntụziaka dịka "ịchọta nkewa dị otú ahụ, gbanwee uru." Ihe odide a dakwara maka ndị ọrụ nke Windows 7, 8 na 8.1.
Kedu ihe ndekọ?
Ndenye Windows bụ nchekwa data ahaziri nke na-echekwa akụkụ na ozi nke usoro sistemụ, ndị ọkwọ ụgbọala, ọrụ, na mmemme ji.
Ihe ndekọ ahụ nwere ngalaba (na nchịkọta akụkọ dịka nchekwa), ntinye (ma ọ bụ igodo) na ụkpụrụ ha (gosipụtara n'akụkụ aka nri nke editọ ndekọ).
Iji malite nchịkọta editọ, na ụdị ọ bụla nke Windows (site na XP), ịnwere ike ịpị igodo Windows + R ma banye regeditna windo ọsọ.
Maka oge mbụ na-agba ọsọ nchịkọta akụkọ n'aka ekpe gị, ị ga-ahụ mkpịsị egwu nke ọ ga - adị mma ịnyagharịa:
HKEY_CLASSES_Mgbọrọgwụ - a na-eji mpaghara a iji chekwaa ma jikwaa faịlụ faịlụ. N'ezie, ngalaba a bụ njikọ na HKEY_LOCAL_MACHINE / Software / Klas
HKEY_CURRENT_UTU - nwere njedebe maka onye ọrụ ahụ, n'okpuru aha ya ka e mere nbanye. Ọ na-echekwara ọtụtụ n'ime sistemụ arụmọrụ awụnyere. Ọ bụ njikọ na ngalaba onye ọrụ na HKEY_USERS.
HKEY_LOCAL_MACHINE - ngalaba a na-echekwa ntọala OS na mmemme n'ozuzu, maka ndị ọrụ niile.
HKEY_Ndị ọrụ - echekwa ntọala maka ndị ọrụ niile nke usoro ahụ.
HKEY_CURRENT_MGBE - nwere otutu nke ngwa niile arụnyere.
Na ntụziaka na akwụkwọ ntuziaka, aha ndị nkewa na-emekarị ka HK +, nke mbụ akwụkwọ ozi nke aha, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ ntinye ndị a: HKLM / Software, nke kwekọrọ na HKEY_LOCAL_MACHINE / Software.
Ebee ka faịlụ ndekọ ahụ dị
A na-echekwa faịlụ ndekọ na usoro diski na Windows / System32 / Config folder - ihe gbasara SAM, SECURITY, SYTEM, na faịlụ SOFTWARE nwere ozi sitere na ngalaba kwekọrọ na HKEY_LOCAL_MACHINE.
A na-eche data site n'aka HKEY_CURRENT_USER na faịlụ NTUSER.DAT zoro ezo na nchekwa "Ọrụ / Aha njirimara" na kọmputa.
Ịmepụta na imezi igodo ndekọ na ntọala
Omume ọ bụla ịmepụtara ma gbanwee igodo ndekọ na ụkpụrụ nwere ike ịme site na ịnweta menu nke dị na-egosi site na ịpị aka na aha nkewa ma ọ bụ na aka nri aka na njirimara (ma ọ bụ na igodo n'onwe ya, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ya.
Igodo ndekọ nwere ike inwe ụdị dị iche iche, ma ọtụtụ mgbe mgbe ị na-edezi ị ga - emeri abụọ n'ime ha - nke a bụ mpaghara ederede REG_SZ (iji setịpụ usoro ihe omume, dịka ọmụmaatụ) na mpaghara DWORD (dịka ọmụmaatụ, iji mee ma ọ bụ gbanyụọ ọrụ ụfọdụ) .
Ọkachamara na ndekọ Editor
Ọbụna n'etiti ndị na-eji nchịkọta edetu mgbe nile, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọ bụla na-eji ihe ndepụta menu ọkacha mmasị. Na n'efu - ebe ịnwere ike ịgbakwunye ngalaba ndị a na-elekarị anya. Na oge ọzọ, ịgakwuru ha, adalatala n'ime ọtụtụ ngalaba aha.
"Download ekwo Ekwo" ma ọ bụ dezie ndekọ ahụ na kọmpụta na-adịghị arụ ọrụ
Iji ihe nchịkọta ihe "Njikwa" - "Ibu Ibu Ibu" na nchịkwa nchịkọta akụkọ, ị nwere ike ibudata akụkụ na igodo site na kọmputa ọzọ ma ọ bụ diski ike. Ihe a na-ejikarị eme ihe bụ ịpịpụta na LiveCD na kọmpụta nke na-adịghị ebuba ma dozie njehie ndekọ na ya.
Rịba ama: ihe "Download ekpuchi" na-arụ ọrụ nanị mgbe ị na-ahọrọ igodo ndekọ Hklm na HKEY_Ndị ọrụ.
Mbupu mbupụ na mbubata
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike mbupụ ọ bụla igodo ndekọ, gụnyere subkeys, iji mee nke a, pịa aka nri na ya ma họrọ "Mbupụ" na menu ndokwa. A ga-echekwa ụkpụrụ ndị a na faịlụ nwere ndọtị .reg, bụ nke bụ ihe ederede ederede ma nwee ike dezie ya site na iji nchịkọta ederede ọ bụla.
Iji bubata ụkpụrụ site na faịlụ dị otú a, ịnwere ike ịpị ya ugboro abụọ, ma ọ bụ họrọ "Njikwa" - "Bubata" na menu nke ndekọ Editor. Enwere ike ịchọta ụkpụrụ dị iche iche n'ụdị dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, iji dozie njikọta faịlụ Windows.
Ọtụtụ mmemme nke atọ, n'etiti ọrụ ndị ọzọ, na-enye aka dozie ndekọ ahụ, nke, dịka nkọwa ahụ si dị, kwesịrị ime ka ọrụ kọmputa dị ngwa. Enwetala m otu isiokwu n'isiokwu a ma anaghị akwado ịrụ nhicha dị otú ahụ. Nkeji edemede: Ndị na - ehichapụ aha - M Kwesịrị Iji Ha?
Ana m achọpụta na nke a abụghị maka ihichapụ ihe ndekọ malware na ndekọ ahụ, mana banyere nhichapụ "mgbochi", nke n'eziokwu anaghị eduga n'ịbawanye na arụpụtaghị ihe, mana o nwere ike ibute usoro malfunctions.
Ozi ndị ọzọ banyere ndekọ Editor
Ụfọdụ isiokwu na saịtị ahụ metụtara njikọ na ndekọ Windows:
Ejiri onye na-elekọta usoro iwu edebanye aha - ihe ị ga-eme na nke a
Esi ewepu ihe omume site na mmalite site na iji nchịkọta edetu
Otu esi wepu akụ site na mkpirisi site na igbanwe ndekọ